Vatungamiriri veGlobal Travel Vanovimba neKudzoreredza Kwakazara Kwekufamba na2023
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Vatungamiriri veGlobal Travel Vanovimba neKudzoreredza Kwakazara Kwekufamba na2023
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hospitality Industry • nhau • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Ongororo nyowani yenyanzvi dzeindasitiri yekufambisa yepasirese, yakaitwa naCollinson neCAPA - Center for Aviation (CAPA), inoratidza kuwedzera kwetarisiro yekutangisazve kufamba kusvika kumazinga ekutanga-denda muna 2023, zvichienderana nezvaitarisirwa kubva mwedzi mishanu yapfuura.
Mhedzisiro yekufamba mune hutano, pamwe nekutya pamusoro pechitsotsi magwaro ekufambisa uye ekuyedza, zvinotarisirwa kuramba zvichinetsa vafambi.
Bhizinesi uye kufamba-refu-kufamba kuti urambe uchinonoka-kudzoreredza zvikamu zvekufamba muna 2022; kutandara kwenguva pfupi kunoona kutanga kwerumutsiriro.
Tarisiro yakaderedzwa muAsia Pacific, sevakuru vendege uye nyanzvi dzekufambisa dzinoramba dzakangwarira kupfuura vamwe vepasirese.
Sezvo iyo ecosystem yekufamba ichiramba ichienderana neiyo denda reCovid-19 ririkuenderera mberi, ichangoburwa yechipiri edition ye "Asia Pacific Travel Recovery Report" kubva kuCollinson, yepasi rose yekupedzisira-ku-kuguma zviitiko zvekufamba, masevhisi enhandare yendege uye kambani yekurapa yekufambisa, uye CAPA - Center for Aviation (CAPA), inoratidza ichangoburwa indasitiri yekufambisa. kudzoreredza kufanotaura - kusanganisira zvinotarisirwa nevafambi - kwegore rinouya uye nekupfuura.
Ongororo yakadzama yeanopfuura mazana mana eC-Suite uye manejimendi epamusoro nhanho yekufambisa indasitiri nyanzvi kubva kune anotungamira mafambiro epasi rose anoburitsa kuti nepo 400% yevakapindura vari kutarisira "kupora zvizere" kusvika 37 pre-denda mazinga muna 2019 - zvichienzaniswa ne2023% muongororo yaApril 35 - tariro yekuti kudzivirirwa kwemombe kwaizosvikwa muUS, UK uye dzimwe nyika shoma dzakasimukira dzakadzika kubva pa2021% kuenda pa33%. Pamusoro pezvo, kushushikana pamusoro pekuvharirwa uye hunyengeri hweCovid-24 mhinduro dzinoramba dzichinetsa kune vanopindura.
Ongororo iyi yakaitwa munaGunyana 2021 naCollinson akabatana neCAPA - imwe yepasirese yakavimbika masosi ehungwaru hwemusika kune indasitiri yekubhururuka nekufamba - kuenderera mberi nekudzidza kwekupora kweindasitiri uye kufanotaura chiitiko chitsva chemufambi.
Polarization maererano nekutonga kwekufamba, kuyedzwa uye marongero anoramba ari pasi rose, aine zvinodiwa pamusika, mapuroteni uye zviyero zviri kuramba zvichichinja mukati memwedzi mishoma yapfuura.
Izvo zvakati, nhamba inowedzera yenyanzvi zvino inotarisira kuvhurazve muganhu hurongwa hwehurumende hwekurerutsira kana kurerutsira zvakanyanya muna 2022 (43%), ukuwo chikamu chimwe muzvitatu chevakabvunzwa pasi rose (32%) vachiri kutarisira kuti hurongwa hwekuvhurwa kwemuganhu nehurumende huvepo nemitengo yakasiyana muna 2022. Uku kudzikiswa kukuru kubva muongororo yaApril 2021. ye56%, uko kusava nechokwadi kwakatonga.
Kuyedzwa kusara, nekuvharirwa kwapera
Kuratidzira kuvimba mukuyedza mapuroteni anogonesa kudzoka kwakachengeteka pakufamba, inopfuura hafu (54% - kuwedzera kwe3% kubva Kubvumbi) vanotarisira kuti Covid-19 bvunzo irambe iri kiyi yekuvhurazve miganhu kusvika pakupera kwa2022, paine mamwe makumi maviri nematanhatu. % tichitarisira izvi kusvika pakupera kwa26. Iyi pfungwa inogona kuoneka nekuvhurwazve kwemuganho mumisika yakaita seSingapore, Australia neUnited States - zvese zvinodudza bvunzo dzeCovid-2023 sezvikamu zvakakosha zvekuderedzwa kwekuvharirwa kana kunyange kuvharirwa. -kuenda mahara.
Zvakadaro, makumi manomwe neshanu muzana enyanzvi dziri kunetsekana nemishumo yehutsotsi hweCovid-74 mhedzisiro uye mapasipoti ekudzivirira. Matanho eavo "vane hanya zvikuru" akakwira kubva pa19% muna Kubvumbi 38 kusvika 2021% munaGunyana 41 uye "kunetseka zvishoma" kubva pa2021% muna Kubvumbi 28 kusvika 2021% munaGunyana 34. Kugadzirisa zvinonetsa zvakadaro, Collinson ari kudyidzana Ndege makumi matatu, nhandare dzendege uye vanopa tekinoroji pasi rose kubatsira kuita nhanho dzekusimudzira panzvimbo dzakakosha dzekutarisa murwendo, pamwe nekuita kuti bvunzo dzeCovid-2021 dzakavimbika dziwanikwe nyore nyore kune vafambi.
Pasi rose, vanonyara pamazana matatu muzvina (72%) vakagovana maonero ekuti zvinyorwa zvekudzivirira vafambi "zvakakosha," nehurumende zhinji dzisingaite njodzi yekuvhurazve miganhu vasina ivo. Uku kuwedzera kwe5% kana zvichienzaniswa neongororo yaApril. Sezvineiwo, vasingasviki chikamu chimwe chete pazvishanu (18%) vakazviona "zvisina kukosha," sezvo dzimwe hurumende dzichibvumidza kupinda zvisinei nemagwaro ehutano edhijitari.
Kana mufambi angopinda mune imwe nyika, anobva atarisana nekuvharirwa. Vanosvika zvikamu zviviri kubva muzvishanu zvenyanzvi (38%) zvino vanotarisira kuti matanho ekuvharirwa acharamba ari munzvimbo yeramangwana rinoonekwa senzira yekuwedzera yekuchengetedza mukuwedzera kune vaccinations uye kuyedza, kubva pa23% muna Kubvumbi 2021.
Sezvineiwo, huwandu hukuru hwevatungamiriri veindasitiri vanoramba vaine tariro pamusoro pechiito chave kuitika munzvimbo iyi. 42% vanotenda kuti matanho ekuvharirwa achabviswa pakupera kwa2021, zvinoenderana nejekiseni uye nhanho dzekuyedza dziri kuwanikwa zvakanyanya. Nekudaro, manzwiro akadzikira kana achienzaniswa ne58% vaive vechitendero chimwe chete muna Kubvumbi 2021.
Chikamu chikuru chenyanzvi dzinotenda kuti kufamba "kwakachengeteka zvakanyanya" kana munhu wese akatevedzera nzira dzekudzivirira (semuenzaniso, kupfeka mask, kushamwaridzana). Asi izvo zvakataura, huwandu hwadzikira nechikamu chegumi nenomwe muzana (17% chakanyorwa munaGunyana; 42% muna Kubvumbi), zvichikurudzira kunyura muchivimbo kunyangwe kupararira kwekudzivirira kwekudzivirira, uye nekupihwa kwakasiyana siyana kune izvo vanhu vangafunga kuti ndezvipi. mhinduro dzakachengeteka.
Saizvozvovo, vemukati vanofunga kufamba se "zvisina kuchengetedzeka" zvakapetwa kaviri: kubva pa4% muna Kubvumbi 2021 kusvika 10% munaGunyana 2021. Izvi zvinoratidza mukana wekusimbisa, kudzidzisa uye kutaurirana kune vafambi kuti kuchengetedzwa kunoramba kuri chinhu chakakosha sei, kunyanya sezvo. vafambi vakawanda vanoenda kumatenga.
Zvisingashamise ipapo, mibvunzo inosara yekuti vafambi vachakwanisa here kudzoka uye kuzorora kana zvirongwa zvavo zvarongerwa. Hazvigoneke, maererano neongororo, nezvikamu zvitatu muzvina zvenyanzvi (79%) vachisarudza kutenda kuti kufamba kunonzwa "kunetsekana" kupfuura denda risati raitika (kubva pa70% muna Kubvumbi 2021).
Mhedzisiro yacho inoratidza chido chakawedzera chekuva "kure nemhomho inopenga" nekumhanya-mhanya uye zviitiko zvekutandarira zvinosarudzwa, kune runyararo rwepfungwa. Izvi zvinoenderana nePriority Pass's global drive yekusimudzira zviitiko zvelounge kune vafambi; nekuunzwa kweBe Relax Spas yekuzororera kwekupedzisira kusati kwasimuka, uye chikafu chisina kubata uye chinwiwa chinopihwa senge Ready 2 Order seti yakapetwa kaviri kuvapo kwayo munzvimbo dzekutandarira kuitira chiitiko chekudyira chisina musono.
Nepo bhizinesi renguva pfupi uye kufamba kwemakambani kwadzoka zvine hungwaru mune mamwe misika, pave nekufamba kushoma pakati peongororo yaApril 2021 naGunyana 2021. Mukufanotaura mafambiro muna 2022, vanongopfuura chikamu chimwe muzvitatu (35%) chevakabvunzwa vanotarisira kudzoreredza kubva ku41-60% kusvika 2019 pre-denda mazinga ekufamba kwenguva pfupi kwebhizinesi, ukuwo 23% vane tariro uye vanotarisira kurova 61-80% ye2019 mazinga gore rinouya. Zvisere chete muzana ndivo vanoona 8%+ ye80 mazinga gore rinouya - inoratidza tapestry yekufamba yakasara mu "maitiro matsva".
MuAsia Pacific chaizvo, 24% chete inoona pfupi-haul makambani ekufambisa achidzoka kune anopfuura 61% ye2019 mazinga gore rinouya - uye 7% inoona kudiwa kunosvika mana-shanu emazinga a2019.
Kufamba kwenguva refu kwebhizinesi kunoramba kuri kure kure nekusvika. Kudzoreredza kusvika muna 2019 mazinga anotarisirwa kutora nguva yakareba kupfuura chero mamwe mativi, nevanopindura vachiva vasina chivimbo munguva yekudzoreredza chikamu, nekuda kwezvirambidzo zvekufamba zvakasara zvakaiswa kureba kupfuura zvaimbofungidzirwa. Maererano ne86% yevakapindura, isingasviki zvikamu zviviri kubva muzvitatu zvebhizimisi refu-refu / makambani ekufambisa misika ichadzoka gore rinouya. Ipo muAsia Pacific, ingori pasi pechikamu chimwe chete muzvitatu (30%) chevakabvunzwa muongororo vanotenda kuti isu hatitombosviki 20% ye2019 mazinga gore rinouya.
Vachitaura nezve tsvagiridzo iyi, Priyanka Lakhani, Commerce Director Middle East neAfrica uye Director South Asia, Collinson akati: "Iyi tsvakiridzo irikuenderera yakakosha kunzwisisa manzwiro eindasitiri uye nekudaro, kutora matanho anodiwa kuve nechokwadi chekuchengetedza uye kwenguva refu. kudzoka kwekufamba kwenyika. Kwemwedzi mitanhatu kusvika gumi nembiri inotevera, zviri pachena kuti seindasitiri, tinofanira kuenderera mberi nekugadzira zvinhu zvitsva nekutaura zvinobudirira kune vafambi. Mumwedzi iri kuuya, tarisiro yedu huru ichave pakugadzira maturusi nemhinduro dzinobatsira vafambi kufamba nenzira yakachengeteka uye nemazvo. ”
CAPA - Center for Aviation Managing Director, Derek Sadubin, akawedzera kuti: "Changa chiri chikomborero kushanda zvakare naCollinson, mutungamiri wepasi rose mune zvakaitika kune vafambi, kuti tiwedzere kuongorora kuti vateereri vedu venyanzvi dzepamusoro vanoona sei mamiriro ekufamba mune ramangwana ari kuitika. Izvo zvakawanikwa zvese zvinonzwisisika, uye mune zvimwe zviitiko zvinoshamisa. Pakazere, isu tinofanirwa kuuya pamwe chete seindasitiri uye tishandise ruzivo urwu kubatsira kuona panodiwa kutarisisa kufambisira mberi kudzoka kwekufamba kwepasirese. "